Iningi lihamba noZondo nasesikhathini sezilingo | News24
Iningi lihamba noZondo nasesikhathini sezilingo
Cape Town - Impela akuyiwa nganxanye kungemanzi, kodwa iningi labantu likhombisa ukumeseka uPostor Zondo wodumo lwezinkulumo ezikhuthaza abantu.
Kuthe kuqala isonto kwasabalala i-video eveza ubuze bakhe lo mfundisi wodumo, ehla enyuka endlini yakhe ekhuluma neselula, kukhona owesifazane khona lapho endlini.
Funda nalolu daba: Kahleni ngamatshe, unenzeni uZondo?
Abantu bazwakalise imibono yabo-ke ngesikhathi sibabuza ukuthi ngabe bazoya yini enkonzweni yakhe ngeSonto nokuthi yini abayilindele ngemuva kokuputshuka kwe-video.
Olunye ucwaningo luveza ukuthi bangu-33% abefundisi abenza izinto eziwukungcola nabesifazane abangashadile nabo kodwa bagcine ngokungabanjwa.
Lezi zibalo zisho lukhulu, ngoba ziveza ukuthi baningi abefundisi abangathembekile kuNkulunkulu nakumakhosikazi abo - uma beshadelwe, kucashunwe.
Nansi eminye imibono yabafundi bethu:
Sanele Chris Gumede: Yebo mina ngikhonza naye uS. Zondo futhi ngeSonto ngizoya enkonzweni, ngeke ngibenankinga ngoba phela ukwehlulela akusikho okwami, munye kuphela umehluleli, uJesu Khrestu. Futhi uma ngiya enkonzweni ngisuke ngingayile kuZondo #Amen.
Sandile Mnguni KaPhakathwayo: Akekho umuntu olunge ngokuphelele...Wonke Umuntu unezinto zakhe azenza eceleni...Akuyekelwe Uzondo.
Iizzy Gamede: UZondo ubengekho ethaveni bakithi kodwa ubesendlini ekhululekile njengawo wonke umuntu uma esendlini nomuntu wakhe. Ayikho into embi ayenzile futhi sisazoqhubeka kakhulu nokumlalela. Siyakweseka Zondo, ungapheli amandla.
Ungangena ekhasini kuFacebook- IzindabaNews24 - ubheke ukuthi batheni abanye abafundi bethu ngalolu dababese nawe ubeka owakho umboni khona noma usithumelele ku-isizulu@news24.com.